Turkiga oo Ciidamo horleh u tababaray Soomaaliya - Awdinle Online
Turkiga oo Ciidamo horleh u tababaray Soomaaliya
Wasaaradda Difaaca ee Turkiga waxay shalay sheegtay inay qalin jebiyeen Dufcad Cusub oo ka tirsan Ciiddanka Milliteriga Somalia, kuwaasi oo tababar ku qaatay Gobalka Isparta ee K/Galbeed ee Turkiga.
Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Difaaca Turkiga waxaa lagu muujiyey inay soo dhaweynayaan Munaasabad lagu qabto Somalia oo lagu soo dhaweynayo Dufcadda 6-aad ee Ciiddanka Lugta ee Milliteriga Somalia (The Somali Sixth Infantry Battalion), kuwaasi oo dib ugu laabtay dalkooda hooyo, kadib, markii ay qaateenTababarka Asaasiga ee Komaandooska muddadii u dhexeysay bishii December 21-dii ee sanadkii hore ee 2020-kii ilaa bishan March 7-dii ee sanadkan 2021-ka.
Wasaaradda Difaaca Turkiga waxay kaloo sheegtay in Ciiddanka qalin jebiyey ay Tababarka Komaandooska ku qaateen Xarunta Tababarka La-dagaalanka waxay ugu yeereen Argagixisadda oo ku taalla Gobalka Isparta ee K/galbeed Turkiga.
Bishan March 1-dii, ilaa 300 Askar Somali ah ayaa dib ugu soo laabtay dalka, kadib, markii ay soo dhamaysteen tababar ay ku soo qaateen Turkiga.
Previous articleGalmudug & Itoobiya oo heshiis kala saxiixday
Next articleJubbaland oo si kulul uga hadashay Ciidanka ay dowladda geysay Gedo